Oman: Fanasivanana tsy nahy ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2018 4:11 GMT
Tao anatin'ny roa volana no nahitako fa voasakana ny bilaogy iray notantanako tao amin'ny lalànan'ny Teknolojia Vaovao tao Oman raha mbola tany ivelany aho. Volana iray manontolo vao tafaverina tamin'ny laoniny izany rehefa nanao fitarainana ofisialy tany amin'ny Manampahefana Mpandrindra ny Fifandraisandavitra aho mba hanokafana indray ny tranonkalako.
Satria very iray volana aho tamin'ny fifamoivoizan'ny tranonkalako noho ny fanakanana izany ary lany saram-pampiantranoana nandritra ny iray volana manontolo dia misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona ny fananana tolotra maromaro ao amin'ny Google toy ny Gmail, Blogger, ary Scholar voasakana mihoatra ny iray andro noho ny fahadisoana .
Mandritra izany fotoana izany dia tsara ny manamarika fa voasakana tao Oman ny tranonkalam-baovao Global Voice Bangla.. inoana fa noho ny fahadisoana. Efa nanoratra tany amin'ny Omantel aho mba hanokafana izany indray, saingy tsy fantatro hoe haharitra hafiriana izany, raha toa ka hovahana indray .